ကို T-Shirt ဒီဇိုင်း Software များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ
Software များ Desktop ကိုထုတ်ဝေခြင်း
by Jacci Howard ထမ်းရွက်
သငျသညျသံ-on ကိုလွှဲပြောင်းအနုပညာလက်ရာများဒီဇိုင်းနီးပါးမည်သည့်ဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ်ဖန်တီးမှုပုံနှိပ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, ပရိုဂရမ်ကိုလွှဲပြောင်းပုံနှိပ်ခြင်းများအတွက် image ကိုလှန်သို့မဟုတ် reverse တစ်ခု option ကိုရပါလိမ့်မယ်, သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်စာရွက်စာတမ်းအတွက် image ကိုလှန်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အချို့တီရှပ်ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်အထူးကိုယ်ပိုင်တီရှပ်ဒီဇိုင်းများနှင့်အလားတူသံ-on ကိုလွှဲပြောင်းယာဉ်စီမံကိန်းများကိုဖန်တီးရှိပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအသုံးပြုနိုင်သည်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအပြင်၎င်းတို့၏ web-based ဒီဇိုင်း tools တွေကိုသုံးပြီးသူတို့ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်များမှတဆင့်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့တီရှပ်များဒီဇိုင်းများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုယခုရှိပါသည်။ သင်သည်သင်၏တီရှပ်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတောင်မှပိုကောင်း, သငျသညျပြီးသားသူတို့အပျေါမှာပုံနှိပ်သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူရှပ်အင်္ကျီအမိန့်ပေးနိုင်သည်။ သငျသညျနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါဘူးနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်တီရှပ်များဖန်တီးရန်အချိန်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ဒီတစ်အများကြီးရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသူသည်သင်တို့ကိုမဖွင့်တီရှပ်များ, ဒါပေမယ့်ဦးထုပ်, ချွေးထွက်, hoodies နှင့်ဝါးတားပိုလိုအဘို့ဒီဇိုင်းခွင့်ပြုသောအခြားအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု option တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့အွန်လိုင်း tools တွေကိုကြီးမားတဲ့သုံးစွဲဖို့ clipart ပုံရိပ်တွေအရေအတွက်, နှင့်စာသားပြင်ဆင်မှုများကိုဆက်ကပ်။ သငျသညျဒီဇိုင်းပြုသောအမှုဖွင့်သောအခါ, Rush အမိန့် Tees မှတိုက်ရိုက်အသစ်ရဲ့တီရှပ်များအမိန့်။ နောက်ထပ် "
အဘယ်ကြောင့် download လုပ်ဆော့ဖျဝဲ, ကလေ့လာသင်ယူ, သင်ရိုးရှင်းစွာစိတ်တိုင်းကျမှင်သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဝဘ်ပေါ်တွင်သင်၏တီရှပ်လက်ျာဘက်ဒီဇိုင်းနိုငျသောအခါထုံးစံတီရှပ်ဖန်ဆင်းခြင်း၏ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အခြားကူညီပြီးနှင့်အတူကိုင်တွယ်။ သငျသညျဒီဇိုင်းနှင့်အတူပြုသောအမှုဖွင့်သည့်အခါတောင်မှပိုကောင်း, သငျသညျထို့နောက်သင့်ချောတီရှပ်အမိန့်နိုငျပါသညျ!
customink.com မှာ, သင်ကလွယ်ကူသော interface ကို, clipart ပုံရိပ်တွေရာပေါင်းများစွာနှင့်သင်သည်သင်၏အုပ်စုအဖွဲ့ဖြစ်ရပ်အကြောင်းမရှိ, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အတီရှပ်ဒီဇိုင်းချင်သော Personal tools ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရှေ့အဖြစ်တီရှပ်၏နောက်ကျောဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်။
သင်ပြုသောအနေတဲ့အခါ, သငျသညျအခွားသူမြားနှငျ့သငျ့ရဲ့တီရှပ်ဒီဇိုင်းကိုဝေမျှနိုင်ပြီး, သငျသညျသူတို့အပျေါမှာပုံနှိပ်သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူတီရှပ်များအမိန့်ပေးနိုင်သည်။ နောက်ထပ် "
SelectSoft ထုတ်ဝေရေးကို T-Shirt လူ့အဖွဲ့အစည်းတခု!
ကိုယ့်တစ်ဦး template ကိုကောက် personalize နှင့် step-by-ခြေလှမ်း wizard ကိုနှင့်တကွကြွလာတော်မူသော T-Shirt လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုဆော့ဖ်ဝဲ, အတူ print ထုတ်။ လွှဲပြောင်းစာရွက်ပေါ်တွင်အချော image ကို print ထုတ်။ 200 တင်းပလိတ်များနှင့် 1000 ကလစ်အနုပညာဖိုင်တွေနှင့်တကွကြွလာ။ သင်တို့သည်လည်းတီရှပ်ပျော်စရာအများကြီးအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်တွေတင်သွင်းနိုင်သည်။
ကို T-Shirt လူ့အဖွဲ့အစည်းတခု! Windows ကို PC များအဘို့။ နောက်ထပ် "
CorelDRAW Photoshop ကိုအောက်ပါ, ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းများအတွက်ရေပန်းစားနှင့်အစွမ်းထက် software ကိုအထုပ်ဖြစ်ပြီး, နှစ်ပေါင်းများစွာန်းကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ကို application ဖြစ်ပါတယ်သောကြောင့်, ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာမှနည်းနည်းယူနိုငျသညျ။ သင်သာရံဖန်ရံခါနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်တီရှပ်ဒီဇိုင်းလုပ်ရှာနေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအစမြင့်မားသောစျေးနှုန်း၎င်း tag ရှိပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျဆော့ဖ်ဝဲသင်ယူဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်ကြောင့်ရရှိနိုင်မယ့်စမ်းသပ်ဗားရှင်းလည်းမရှိ။ ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ? သငျသညျကကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်လာစေရန်နှင့်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးအသစ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတွေ့လိမ့်မည်။ အလွန်အနည်းဆုံး, သငျသညျအကြီးအတီရှပ်ဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံလေ့လာသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။
CorelDRAW က Windows PC များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်။ နောက်ထပ် "
အခမဲ့ TSHIRT သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. , သင်တီရှပ်များဒီဇိုင်းကိုသုံးနိုင်သည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ toolset ညွှန်ပြအဖြစ်အခမဲ့ TSHIRT သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ software ကိုသင်ယူဖို့ခက်ခဲမရှိ, functions တွေရောက်ရှိဖို့-မ-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှ menus တွေအတွက်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံလွယ်ကူပါတယ်။
အခမဲ့ TSHIRT သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုတိရိစ္ဆာန်များကနေအဆောက်အဦးများ, လက်နက်များမှပန်းပွင့်နှင့်ပိုပြီးရန်, အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက်သုံးစွဲဖို့ clipart ပုံရိပ်အများကြီးပေးထားပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းအသုံးပြုရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်တွေ upload တင်လို့ရပါတယ်။ နှင့်အညီ, သင်တန်း, အဲဒါကိုသင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းရန်စာသားအားဒီဇိုင်းနှင့်ဖောင်ရွေးချယ်စရာပေးထားပါတယ်။ နောက်ထပ် "
PageMaker7မှာမာစတာစာမျက်နှာများပေါ်တွင်စာမျက်နှာနံပါတ်ထည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
ယင်းနှစ်ချက် Gatefold အကြောင်းလေ့လာပါ
ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ရိုးရာ Prepress လုပ်ငန်းစဉ်
မှာ Desktop Publishing သို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းစီးပွားရေး Start
အလိုအလျောက် QuarkXPress အတွက်စာမျက်နှာနံပါတ်ထည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါအရောင်က Black မှဒီဇိုင်နာရဲ့လမ်းညွှန်
App Store မှာမှဖယ်ရှားပြီး Apps ကပကို Install လုပ်နည်း
Cube - အခမဲ့ PC ကိုဂိမ်း
အကောင်းဆုံးက iPhone Game Developers
အယ်လ်ဘမ်သင့်က MP3 Music ကိုမှမျက်နှာဖုံးများ Add
၎င်းသည် iPhone ကို Jailbreak အဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး
PowerPoint အတွက်စာသားခြုံဖို့တစ်ဦးက Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
အားလုံး Imaging, မင့်ကိုစကင်များတွင် resolution နဲ့ color depth အရေးပါ
ငါဘယ်လို Mac ကိုထံမှတစ်ဦးကို CD သို့မဟုတ် DVD ကိုထုတ်မည်သလား?
WPA2? WEP? ကြှနျတေျာ့ကို Wi-Fi ကို Secure ရန်အကောင်းဆုံးလျှို့ဝှက်ကုဒ်ကဘာလဲ?
LG က G Flex ကို2ဆန်းစစ်ခြင်း
တစ်ဦး BSA ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
PS1 အဘို့အဒစ္စနေးရဲ့ Hercules cheat
သင့်ရဲ့ iPad ပေါ်တွင် iCloud ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
မာယာသင်ခန်းစာစီးရီး - ဂရိကော်လံမော်ဒယ်
ထိပ်တန်းဖိအား-Sensitive ဂရစ်ဖစ် Tablet များ
Google က Cardboard 3D VR နားကြပ်အကြောင်းအားလုံး Android အတွက်
ဒါဟာအားသွင်းမယ့်နေချိန်မှာသင်ကဒါဟာသုံးပါ အကယ်. သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းပေါက်ကွဲကြမည်မဟုတ်